122s &#39;Muxuu Jabinta Xun Ay Tahay Robert Forster&#39; BTS | El Camino images and subtitles
-Hey, aan ... -Isaga sax, waanu roonnahay dhanka EPK. -Rolling! Forster: Way kuu yeerayaan waxayna dhahaan Vince Gilligan ayaa raba inuu adiga kugu daro mashruuc kale. Qof walbana wuxuu leeyahay, "Heersare." Waa shey wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, haddii aad jeceshahay Kirby-kaaga, Waan ku doodi doonaa waan ka heli karaa mar labaad adiga kuu shaqeeya. Dadku marar badan ayey ii yimaadaan oo waxaad tidhaahdaan, "Jabinta Xun." Oo anigu waxaan joogay hal dhacdo oo keliya. Waxay ahayd wax aan muhiimad ku lahayn shaqadayda. Waxaan sidoo kale soo maray labo waxyaalood oo kale oo wanaagsan, laakiin "Jabinta Xun" ayaa ah waxyaabaha ugu waa weyn. Alaabada Hoover, halkaasay ku sugan yihiin halkaas derbiga gadaashaada. Fiiri, ma xasuusto sax ah, sida, password, waa hagaag, laakiin waxay ahayd wax madhan. Waa mashruuc aad u xiiso badan oo aan qabanayno. Aaron waa xiddigga weyn ee waxsoosaarkan, waana ku faraxsanahay inuu helay sheeko uu isagu leeyahay. Waxaan xasuusinayaa jilayaasha iyagu mooda inay ereyada kaliya kujiraan, maahan, waxay ku saabsan tahay dhaqanka iyo waqtiga. Tani ... hore ayaa laguugu leeyahay. Waxaad rajaynaysaa cajaladda xigta ee aad isugeynayso wax kasta oo wanaagsan oo aad horey u soo qabtay wax kasta oo cusub oo adiga lagaa weydiin karo. Nasiib yar, goor dhaw waad heli doontaa naftaada ... Ma fahmin ... mayl badan oo halkan laga yimid. Allaha kugu barakeeyo. Waxa aad iskudaydo inaad samayso waa keenida maaddada sidaad u aragtay mid qoran, oo weliba bixi wax qiimo yeelan kara gelintaas sawirka. Jesse: <i>Ma heshiis baa?</i> <i>Eraygaagu waa muxuu yahay?</i> [Inhales] Waa. Waxay ahayd maalin wanaagsan. ♪♪
&#39;Muxuu Jabinta Xun Ay Tahay Robert Forster&#39; BTS | El Camino
< start="0.466" dur="1.635"> -Hey, aan ... -Isaga sax, waanu roonnahay >
< start="2.101" dur="2.036"> dhanka EPK. -Rolling! >
< start="4.137" dur="2.302"> Forster: Way kuu yeerayaan waxayna dhahaan >
< start="6.439" dur="4.037"> Vince Gilligan ayaa raba inuu adiga kugu daro mashruuc kale. >
< start="10.476" dur="3.537"> Qof walbana wuxuu leeyahay, "Heersare." >
< start="14.013" dur="1.635"> Waa shey wanaagsan. >
< start="15.648" dur="2.703"> Si kastaba ha noqotee, haddii aad jeceshahay Kirby-kaaga, >
< start="18.351" dur="2.835"> Waan ku doodi doonaa waan ka heli karaa mar labaad adiga kuu shaqeeya. >
< start="21.186" dur="2.003"> Dadku marar badan ayey ii yimaadaan >
< start="23.189" dur="2.703"> oo waxaad tidhaahdaan, "Jabinta Xun." >
< start="25.892" dur="1.969"> Oo anigu waxaan joogay hal dhacdo oo keliya. >
< start="27.861" dur="3.836"> Waxay ahayd wax aan muhiimad ku lahayn shaqadayda. >
< start="31.697" dur="1.736"> Waxaan sidoo kale soo maray labo waxyaalood oo kale oo wanaagsan, >
< start="33.433" dur="2.769"> laakiin "Jabinta Xun" ayaa ah waxyaabaha ugu waa weyn. >
< start="36.202" dur="1.936"> Alaabada Hoover, halkaasay ku sugan yihiin halkaas >
< start="38.138" dur="1.901"> derbiga gadaashaada. >
< start="38.138" dur="1.901"> Fiiri, ma xasuusto >
< start="40.039" dur="2.135"> sax ah, sida, password, waa hagaag, >
< start="42.174" dur="1.502"> laakiin waxay ahayd wax madhan. >
< start="43.676" dur="3.204"> Waa mashruuc aad u xiiso badan oo aan qabanayno. >
< start="46.88" dur="3.269"> Aaron waa xiddigga weyn ee waxsoosaarkan, >
< start="50.149" dur="3.771"> waana ku faraxsanahay inuu helay sheeko uu isagu leeyahay. >
< start="53.92" dur="2.702"> Waxaan xasuusinayaa jilayaasha iyagu mooda inay ereyada kaliya kujiraan, >
< start="56.622" dur="3.537"> maahan, waxay ku saabsan tahay dhaqanka iyo waqtiga. >
< start="60.159" dur="3.237"> Tani ... >
< start="63.396" dur="2.169"> hore ayaa laguugu leeyahay. >
< start="65.565" dur="2.97"> Waxaad rajaynaysaa cajaladda xigta ee aad isugeynayso >
< start="68.535" dur="2.201"> wax kasta oo wanaagsan oo aad horey u soo qabtay >
< start="70.736" dur="2.936"> wax kasta oo cusub oo adiga lagaa weydiin karo. >
< start="73.672" dur="3.605"> Nasiib yar, goor dhaw waad heli doontaa naftaada ... >
< start="77.277" dur="2.335"> Ma fahmin >
< start="77.277" dur="2.335"> ... mayl badan oo halkan laga yimid. >
< start="80.879" dur="1.67"> Allaha kugu barakeeyo. >
< start="82.549" dur="2.602"> Waxa aad iskudaydo inaad samayso waa keenida maaddada >
< start="85.151" dur="2.135"> sidaad u aragtay mid qoran, oo weliba bixi >
< start="87.286" dur="1.868"> wax qiimo yeelan kara >
< start="89.154" dur="1.802"> gelintaas sawirka. >
< start="90.956" dur="1.369"> Jesse: Ma heshiis baa? >
< start="92.325" dur="3.47">Eraygaagu waa muxuu yahay? >
< start="95.795" dur="2.635"> [Inhales] Waa. >
< start="98.43" dur="1.602"> Waxay ahayd maalin wanaagsan. >